2020 / 10 / 15 UkwahlukanisaBlog 2993 0
Icala lanamuhla langokwezifiso limayelana nabaninikhaya abahlala eQuanzhou, abanokunambitheka okuhlukile kwimfashini, njengokuklanywa okwenzelwe wena, futhi banezidingo eziphakeme zokugcina isitoreji.
Umklamo omncane we-ultra of the countertop besinompompi omnyama, Isikimu sombala omnyama nomhlophe yiyona yakudala kakhulu, ayiphelelwa yimfashini High umbala value besitsha esiteji, ake lonke uswidi balolonge more ukunambitheka wobuciko, umuzwa abaphezulu egcwele. I-countertop basin kulula ukuyifaka, futhi kulula kakhulu ukufaka isitayela kamuva.
Insimbi emnyama iyinetha elishisayo eminyakeni embalwa edlule, futhi ikhaya lesitayela alinakuba ngaphandle kokuhlobisa kwalo. Setha ngaphansi kwesibuko sekhabethe lesitoreji esimnyama sensimbi, okwenza umqondo wemfashini wesitayela saseScandinavia ugqame kakhulu.
Ibhokisi lokulenga elihambisanayo liyasuswa futhi ingalungiswa ngokuya ngemikhuba ejwayelekile yokusebenzisa, futhi ingabekwa kwesobunxele noma kwesokudla.
Umklami uPeng ukhethe le sethi yokwakhiwa kwekhabethe lokugezela, hhayi kuphela kunani lobuso ngaphezulu kunesifiso somndeni omncane wemfashini, kweminye imininingwane yomsebenzi futhi "uyacophelela" kakhulu.
Kufanele sibhekane nendawo yokugezela nsuku zonke, sinethezekile futhi sifudumele, indawo enhle futhi enhle, ingasenza sikhuthazeke nsuku zonke. Ngabe ushukunyiswe yilomklamo wendlu yomnikazi eKailai Xiang Villa, eQuanzhou?
Ungawashintsha kanjani ompompi basekhishini?
Okufanele Ukwenze Lapho Uthenga Umpompi Wekhishi
Umbiko we-2020 US Bathroom Trends: Amathoyilethi ahlakaniphile, ompompi bezinzwa, neBat Custom ...